कुरा हिंसा–हत्याको होइन, क्रान्तिको हो – विप्लव – eratokhabar
ई-रातो खबर २०७६, ३० बैशाख सोमबार १३:१८ May 13, 2019 899 Views
हामीले मुक्ति र बलिदानभन्दा अरू के देखेका थियौं र ? एकदमै मिल्ने र काँध जोडेर जीवनका धेरै समय लडेका कमरेडहरू पनि त त्यहाँ छन् । के तिनले हामीलाई क्रान्ति गरेबापत समाप्तै पार्ने मात्र सोच्लान् ? उनीहरू त्यहीं बसेर पनि त क्रान्तिलाई सहयोग गर्न सक्छन् । हामीले वैज्ञानिक समाजवाद ल्याउने अठोट गर्दा बिच्किन र चिढिन किन पर्छ र ? क्रान्तिको निर्ममता आफ्नै ठाउँमा छ । हामी सबै चुनौती सामना गर्न तयार भएर त यो मार्गमा डटेका छौं ।
नेकपाका युवा नेता बस्नेत गिरफ्तार
सुकुम्बासी बस्ती हटाउन नगरपालिकाको उर्दी, बस्ती हटाए जनकारबाही गर्ने जनपरिषद्को चेतावनी